Sheekada filimka Sonu Ke Tito Ki Sweety : qosol kuguma hari doono hadii aad daawatid filimkaan mada daalada dhameestiran leh – Filimside.net
Waxaa maanta oo Jimco ah tiyaatarada la saaray filimka shactirada badan aadna loo isugu daba riday Sonu Ke Tito Ki Sweety kaasi oo qof walbo asigoo qosolka ka dhamaaday tiyaatarka kasoo baxay.
Jilaayaasha filimkaan: Kartik Aaryan, Nushrat Bharucha, Sunny Singh Nijjar, Alok Nath, Virendra Saxena, Deepika Amin, Ayesha Raza, Pawan Chopra, Rajesh Jais
Qiimeyta sheekada filimkaan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar ayaa la siiyay)
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka SKTKS: Fikrada filimkan oo an mid Bollywood-ka ku cusub si gaar ah jaceylka ka dhaxeeyo iyo naf isku hurida labo saaxiibo ah iyo jaceylka lamaane ka dhaxeeyo midkaas oo si shactiro iyo iskaba wareeg loo xardhay
Muxuu Ku Liitaa Filimka SKTKS: Mararka qaar fariinta habka lo dhigay waa mid isku soo laab laabaneysaa balse waxaad ku hilmaameysaa shactirada xad dhaafka ah.
Fariinta Filimka SKTKS Oo Kooban: Sheekada filimka waxay ku socotaa labo walaalo ah Sonu (Kartik Aaryan) – Titu (Sunny Singh) iyo gabbar saaxiib la ah oo ay ku kalsoon yihiin Sweety (Nushrat Bharucha).
Titu (Sunny Singh) wuxuu dhibane u yahay jaceylka waayo si joogto ah oo sahlan ayuu jaceylka ku galaa laakiin gabbar walbo oo uu jaceyl u sheegto qalbiga ayay ka jebisaa.
Sonu (Kartik Aaryan) waa wiil dagan sidoo kalena caqli badan inta badana wuxuu talo siiyaa sidoo kalena uu caawiyaa saaxiibkiis Titu (Sunny Singh).
Sonu (Kartik Aaryan) wuxuu kaga digaa saaxiibkiis Titu (Sunny Singh) ama kala talinaa inuusan jaceyl u qaadin ama ku dhac dhacin Sweety (Nushrat Bharucha).
Laakiin Titu (Sunny Singh) tallada saaxiibkiis dhag jalaq uma siinayo waayo dabeecadiisa ayaaba ah gabadhii uu barto inuu waan ku jeclahay horey ka dhaho!
Dhinaca kalena Titu (Sunny Singh) isagana wuxuu si qoto dheer jaceyl ugu qaadaa Sweety (Nushrat Bharucha) asigoo qal qaalo u galaayo sidii uu ku kasban lahaa.
Sida darteed Sonu (Kartik Aaryan) arinkan wu dhibsanaa wuxuuna bilaabaa fursad uu labadooda isaga hor keenayo si uu isaga u hantiyo Sweety (Nushrat Bharucha).
Hadaba Sweety (Nushrat Bharucha) waxay ogaanee in Sonu (Kartik Aaryan) kasoo horjeedo is fahanka kala dhaxeeyo Titu (Sunny Singh) waxayna bilaabee dagaal ka dhan ah Sonu.
Hadaba sedexdii saaxiibo caddow ayay isku noqonayaan labo waa isku dhinac Titu (Sunny Singh) iyo Sweety (Nushrat Bharucha) halka Sonu (Kartik Aaryan) uu isagan kaligiis yahay maxaa kala qabsan doono sheekadana halkee isku rogi doontaa ayaa loo daawan doonaa filimkaan qaybihiisa dambe.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Sonu Ke Titu Ki Sweety: Director Luv Ranjana xariif ku yahay filimada fariinta noocaan ah xambaarsan madaama horey uu daawadayaasha qalbigooda ku xaday mashaariicda Pyaar Ka Punchnama iyo Pyaar Ka Punchnama 2 kuwaas oo dhalinta aad u jecel yihiin.
Inaba caadi ma ahan hadalada kaftanka ee filimkan lagu hadlaayo iyo qaabka sheekada loo qoray oo kugu qasbeyso inaadan ka xiiso dhigin madaama saaxiibo jaceyl isku qabsanayaan si mada daalo loo dhigay heer sare tahay.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Kartik Aryan waa midka filimkaan loo daawan doono madaama muuqaal walbo oo ku leeyahay mashruucaan heer sare loo diyaariyay isagana si cajiib badan uu kaga baxsaday.
Sunny Singh doorkiisa waa heer sare oo weliba kusoo jiidan doono hab jaceylkiisa dabacsan iyo sida ay saaxiibkiis is jecel yihiin isku dhibayaan.
Inaba caadi ma ahan atirishada Nushrat Bharucha sida ay labada wiil isaga dhicisay weliba bandhig awood badan ayay la timid waxayna u tahay laf dhabar filimkaan door ahaan iyo muuqaal ahaan.
Ruug cadaa Alok Nath wuu soo laabtay wuxuuna ka qaatay door wacan weliba hadaladiisa kaftanka iyo waaya aragnimada ka muuqato ayaa aad kuu soo jiidanayaan.
Gunaanad: SONU KE TITU KI SWEETY waa filim musigadiisa marhore Hit noqotay, goos gooskiisa aad looga helay, haatana fariintiisa siweyn loo jeclaaday, bandhiga jilaayaasha xasuus gaar ah kugu reebayaan sidoo kalena dhalinta loogu tala galay, intaas oo is kaashatay awgeed waa inuu si qasab ah Hit lama filaan ah ku noqdaa!!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka SONU KE TITU KI SWEETY: